Ahoana ny fametrahana ny navigateur default amin'ny iPhone 🥇 Emulator.online ▷ 🥇
Amin'ny fahatongavan'ny fanavaozana ny iOS 14 ho an'ny iPhone dia azo atao ny manova ny rindranasa default mba hanokatra tranokala sy rohy ao anaty mailaka, chat ary tambajotra sosialy, nefa tsy voatery handalo ny fampiharana Safari (foana ny fanamoriam-pejy mahazatra amin'ny rehetra Vokatra Apple). Toa tsy dia misy dikany sy miharihary io, indrindra raha avy amin'ny tontolon'ny Android isika, fa ny iray amin'ireo tanjaka / fahalemena lehibe indrindra nataon'i Apple dia noho ny fifamatorana mafy tamin'ny rindranasan'ny rafitra Apple, izay tsy azo natao tsy jerena tanteraka. Raha azo heverina ho tombony hitazomana ny tontolo iainana i Apple dia voafetra tokoa ny fahafahan'ny mpampiasa, izay raha ny marina dia tsy afaka nanokatra ny rohy niaraka tamin'ny mpitety tranonkala nofidiny.
Toa niova ny mozika tamin'ity fanavaozana ity: andao hiaraha-mahita ny fomba hametrahana navigateur default amin'ny iPhone, misafidy ireo safidy hafa azo alaina ao amin'ny App Store (avy amin'ny Google Chrome amin'ny alàlan'ny Mozilla Firefox, Opera ary ny mpitety tranonkala tsy fantatra anarana an'ny DuckDuckGo).
Ao amin'ireto toko manaraka ireto dia hasehonay anao voalohany ny fomba hijerena ireo fanavaozana ny rafitra ho an'ny iPhone ary, aorian'ny fahazoana ilay iOS 14 rafitra fiasa, afaka manohy ny fametrahana ny mpizahatany isika ary manamboatra ireo fanovana ilaina mba hahatonga azy io ho toy ny mpizahatany default amin'ny iPhone.
Ahoana ny fomba hanavaozana ny iPhone
Alohan'ny hanohizanay dia amporisihinay hatrany izany zahao ireo fanavaozana ny iPhone, indrindra raha tsy nahita fanovana na fanavaozam-baovao izahay tato anatin'ny andro vitsivitsy na volana lasa. Raha hanavao ny iPhone dia ampifandraiso amin'ny tamba-jotra Wi-Fi haingana (ao an-trano na any amin'ny birao), tsindrio ilay application configurations, andao mankany amin'ny menio General, miroso hatrany isika Fanavaozana rindrambaiko ary, raha misy fanavaozana, apetraho amin'ny alàlan'ny fanindriana Ampidino sy mametraka.
Amin'ny faran'ny fampidinana dia averintsika indray ny iPhone ary miandry ny fanombohana ny rafitra fiasa vaovao; raha tsy misy fanavaozana ny iOS 14 (angamba satria antitra loatra ny iPhone), tsy azonay atao ny manamboatra ny fanovana fitetezana default. Raha mila fanazavana fanampiny, dia ampirisihinay hamaky ny mpitari-dalana anay. Ahoana ny fomba hanavaozana iPhone. Raha te hanova ny iPhone ho an'ny vaovao kokoa izahay na ho an'ny iray voaverina indray nefa mifanaraka amin'ny iOS 14, manasa anao izahay hamaky ny torolalana ho anay Iza amin'ireo iPhone no mendrika vidiana androany? Misy kinova sy maodely azo alaina.
Ahoana ny fametrahana na fanavaozana ny browser an'ny antoko fahatelo
Aorian'ny fanavaozana ny iPhone, apetrakay ny mpitety tranonkala ankafizinay amin'ny alàlan'ny fanokafana ny App Store sy ny fampiasana ny menio fikarohana, mba hahafahanao mikaroka Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera Touch, na ny tranokala DuckDuckGo.
Raha efa manana mpitsikilo iray na maromaro napetraka amin'ny iPhone-tsika, alohan'ny hanohizany ny toko manan-danja indrindra amin'ity torolàlana ity, alao antoka fa havaozina amin'ny kinova farany izy ireo amin'ny alàlan'ny fanokafana ny App Store, tsindrio ny sary famantarana ny mombamomba anay eo amin'ny ankavanana ambony sy farany manindry Manavao ny rehetra. Mahafantatra mpizaha hafa hafa mankany Safari ve isika? Azontsika atao ny manamboatra izany eo noho eo amin'ny famakiana ny torolalana ho an'ny Ireo mpitety tranonkala tsara indrindra ho an'ny iPhone sy iPad solony Safari.
Ahoana ny fametrahana ny navigateur default vaovao
Aorian'ny fisintomana na fanavaozana ny browser an'ny antoko fahatelo amin'ny iPhone, azontsika atao ny manamboatra azy io ho toy ny browser default ho an'ny rohy tsirairay na pejy web izay hosokafantsika amin'ny alàlanay mankany amin'ny rindranasa. configurations, mikorisa mandra-pahitanao ny anaran'ny browser ary, rehefa nosokafana ianao dia tsindrio ny menio Rindrambaiko fitetezana default ary manaova ny safidintsika amin'ity lisitra ity.
Ny fipihana ny anaran'ny mpizaha dia hampiseho ny marika fanamarinana, famantarana fa nanaiky ny fanovana ny rafitra. Tsy hitanay ao anaty lisitra ilay mpizaha anay na tsy hita ilay entana Rindrambaiko fitetezana default? Izahay dia manamarina fa ny fitetezana sy ny rafitra fikirakirana dia vaovao (araka ny hita tao amin'ireo toko teo aloha), raha tsy izany dia tsy ho azo atao ny misafidy.
Amin'ity fanovana kely ity dia manandrana mivoaka ny boaty i Apple ary manakaiky kokoa ny fahamendrehana sy ny fahaiza-manao hita amin'ny finday Android maoderina. Raha ny marina, amin'ny iOS 14 dia tsy mifamatotra amin'ny fampiasana Safari isika isaky ny rohy nosokafana tamin'ny mailaka na chat, izay mamela antsika hampiasa ny tranokala tianao indrindra raha ilaina izany. Izy io dia azo jerena ho "antsasaky ny revolisiona" na koa "evolisiona": tsapan'i Apple fa tsy mifamatotra amin'ny rindranasa vokariny foana ny mpampiasa azy, ary amin'ny ankamaroan'ny tranga dia mampiasa Safari fotsiny izy ireo satria ny rafitra tsy. afaka mampiasa mpanamory hafa ianao amin'ny alàlan'ny default (izay azo atao amin'ny iOS 14 izao). Ho fanampin'ilay mpitety tranonkala dia misy ihany koa ny rindrambaiko fanodinana default ho an'ny rafi-pandrafetana rafitra hafa toa ny Mail: noho izany dia afaka manokatra ny mailaka na ny miraiki-po aminay amin'ny mpanjifa hafa izahay nefa tsy mila mandalo amin'ireo rindranasa mifandraika amin'ny tontolon'ny Apple (ny haingana kokoa fa tsy foana ireo manana fiasa bebe kokoa).
Raha te hanova ny fampiharana default amin'ny smartphone Android izahay, dia mamporisika anao hamaky ny torolalana ho anay Ahoana ny fomba fanovana ireo fampiharana default amin'ny Android. Matetika izahay mampiasa solosaina Windows 10 fa tsy hainay ny manova ireo programa tsy misy fampiasa? Amin'ity tranga ity dia afaka manampy amin'ny dingana voalaza ao amin'ny mpitari-dalana antsika isika. Ahoana ny fomba fanovana ireo apps default ao amin'ny Windows 10.
Moa ve isika tsy te handao ny Safari tsy ho manga na mbola heverintsika ho navigateur tsara indrindra ho an'ny iPhone? Amin'ity tranga ity dia afaka manohy mamaky ao amin'ny lahatsoratray izahay Fetsy Safari ary endri-tsoratry ny iPhone sy iPad tsara kokoa, mba hahafahanao mianatra avy hatrany ireo fika mahasoa isan-karazany sy asa miafina hanohizana ny fampiasana ity browser default ity.
Ahoana ny fomba hamoronana lisitra playlist ao amin'ny YouTube